Public Health Concern यसरी गर्न सकिन्छ सामान्य डेङुको घरमै उपचार ! – Public Health Concern
यसरी गर्न सकिन्छ सामान्य डेङुको घरमै उपचार !
डेंगुको लक्षणसहित सामान्य ज्वरो आयो भने नआत्तिई चिकित्साकर्मीको सल्लाहमा घरमै स्वास्थ्य लाभ गर्न सकिन्छ,’ शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार ‘जोखिम समूह’ मा रहेकाहरूले भने हालको डेंगुको प्रकोप देखिएको अवस्थामा सामान्य ज्वरो देखिए पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यो जोखिम समूहअन्तर्गत बच्चा, बूढापाका, गर्भवती, दीर्घरोगी, पेप्टिक अल्सर भएका, मोटोपना भएका, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएकाहरू पर्छन् ।